Daawo Muuqaal Putland oo maanta xeray Xaduud beeneedka kala qaybiya walaalha Gaalkaciyo!! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO Daawo Muuqaal Putland oo maanta xeray Xaduud beeneedka kala qaybiya walaalha Gaalkaciyo!!
Daawo Muuqaal Putland oo maanta xeray Xaduud beeneedka kala qaybiya walaalha Gaalkaciyo!!
Feb 12, 2017MAQAALO, MUUQAAL
Dhaliyaro Reer Putland oo Daraati ka hadlay Xuduuda Magaalada Gaalkaciyo oo kal qaybisa Daarood Iyo Habargidir Dhalintaan goobta ka hadashay ayaa sheegeen in Xuduudaas ee keeneen Itoobiyaan Tigrey ah oo Safaarad beenaad ah ku dhex leh Garoowe. Dhilinyaradaan ayaa Madaxweynaha Cusub ka codsadaý inuu ufuryo waddooyika iyo Magaalada Gaalkaciyo oo loo kala qaybiyay Daarood Iyo Habargidir wana musiibo soo taagan.
“Waxaa Nasiib daro ah in Mar labaad La xidho Khadkii Cagaarnaa ee Magaalada Gaalkacayo.
Maamul goboleedka Somaliyeed ee puntland ayaa waxay ku xidheen foostooyin laga soo buuxiyay sibidh oo shub ah waxa ayna ku xereen goobaha khadkii cagaarnaa ee shacabku Daraat isku fureen oo manta dib loo xeray.
Soomaaliyeey Ogaada inayna jirin colaad u dhaxaysa dadka Soomaliyeed balse ee tan ay tahay mid siyaa sadaysan oo kooxo gaara ay ka rabaan Hunguri iyo ujeedo Dagaal gaara ay ku leeyihiin Tigrey iyo sxbkii.
Dadka Soomaaliyeed waa Dad walaalo ah meel walba oo ayna joogaan qaarkood Hal Guryo kuwada Nool yihiin.
Daawo daraat markii ee Shacabka isku fureen Dadkii ka hadlay oo sheegeen in waxaan Itoobiya ay keentay
Sawiradaan waa Maanta Sawirro laga soo qaaday Qadkii kala qaybinaayay Gaalkaciyo ee Putland xeratay
Previous PostAkhriso Qodobbada Ugu Muhiimsan Heshiiska Imaaraatka Kula wareegayo Dekadda iyo Garoonka Berbera!! Next PostAxmed Madoobe oo kulan xasaasi ah la qaatay Micheal Keating & Francisco Madeira (Daawo Sawirro)